Macallinkii Bin Salmaan oo xog yaab leh ka bixiyey | Caroog News
Macallinkii Bin Salmaan oo xog yaab leh ka bixiyey
December 11, 2018 - Written by admin
Dhaxal sugaha boqortooyada Sucuudiga ee muranka uu hareeyay, Maxamed Bin Salmaan ma ahayn nin dad badan ay ka yaqaanneen dunida ka hor inta uusan indhaha caalamka ku soo jiidanin qabashada xil uu ku helay boqornimada aabihiis, cid kalena aysan ku qabsan karin. Wariyaha laanta Afcarabiga ee BBC-da Rachid Sekkai, oo macallinka maadada ingiriiska u ahaa maxamed Bin Salmaan markii uu yaraa, ayaa ka sheekeynaya khibraddiisii la yaabka lahayd ee uu kala kulmay qasriga boqortooyada.
Horraantii sannadkii 1996-kii, anigoo bare ka ah iskuul tayo wanaagsan iyo ixtiraam weyn leh oo lagu magacaabo Al-Anjal, oo ku yaalla magaalada Jidda, ayuu taleefan ii soo dhacay.
Amiir Salmaan Bin Cabdul Casiis Aala Sacuud, oo xilligaas ahaa duqa magaalada Riyaad ayaa si ku meel gaar ah ugu soo guuray magaalo xeebeedka dhinaca ku heysa badda cas ee Jidda, wuxuuna u baahday macallin luuqadda ingiriiska bara carruurtiisa.
Ninka mustaqbalka noqon doona boqorka Sucuudiga ayaa la soo xiriiray maamulka iskuulka waxaana si aan ka laba labeys lahayn la iigu diray qasriga boqortooyada , si aan macallin khaas ah ugu noqdo carruurta ay u dhashay xaaskiisii ugu horreysay, kuwaasoo kala ah: Amiir Turki, Amiir Nayef, Amiir Kaalid iyo dabcan Amiir Maxamed.
Darawal ayaa aqalkeyga iga qaadi jiray saacaddu marka ay tahay 07:00 subaxnimo, wuxuuna i geyn jiray iskuulka Al-AnjalI, markii aan cashirrada dhameeyo oo galabtii la gaarana wuxuu i geyn jiray qasriga.
Markii aan ka gudubno albaabbada sida weyn amaankooda loo ilaaliyo, gaariga wuxuu sii dhex mari jiray darjiimo ay ku taallo dhir cagaaran, kuwaasoo ay si joogto ah uga shaqeeyaan shaqaale ku labisan dhar cad.
Ka dib waxaan tagi jirnay meel gawaarida la dhigo oo ay ka buuxeen baabuurta noocyadooda ugu qaalisan.
Marka aan soo gaarno gudaha hore ee qasriga, waxaa i qaabili jiray agaasimaha qasriga oo lagu magacaabi jiray Mansoor El-Shahry – kaa soo ahaa nin da’ dhexaad ah oo uu saaxiib dhow la ahaa Maxamed Bin Salmaan, oo xilligaas 11 sano jir ahaa.
Taleefanka fooneeyaha ah ee ay waardiyeyaasha isticmaalaan
Maxamed wuxuu sidoo kale u muuqday inuu aad u daneyn jiray inuu wakhti la qaato ciidanka waardiyaha u ah qasriga, intii uu daneyn lahaa cashirradeyda. Maadaama uu ahaa cunuga ugu weyn walaalihiis, wuxuu u muuqday in loo oggolaan jiray sameynta wax kasta oo uu jecelyahay.
Awooddeyda ku saabsan inaan amarka macallinimada siiyo amiiradda yar yar waxay ku ekaan jirtay inta uu ka imaanayo Maxamed Bin Salmaan.
Wali waxaan xasuustaa inuu fasalka ku dhex isticmaali jiray taleefanka fooneeyaha ah ee ay isticmaalaan ciidanka waardiyeyaasha ah, kaa soo uu ka soo qaadan jiray mid ka mid ah waardiyeyaasha.
Wuxuu u siticmaali jiray inuu ku dhoho hadallo lagu qoslo oo aniga igu saabsan iyo kaftan uu la wadaagayay walaalihiis iyo waardiyeyaasha jooga dhinaca kale.
Wakhti yar gudihiis waxaan ku noqday qof u hoggaansan Maxamed iyo walaalihiisa ka yar yar. Inkastoo aan amiirrada wax ku barayay meel aan aad ugu xakameysanahay, ardaydeyda qasriga waxay ahaayeen sida kuwa iskuulka oo kale, way jeclaayeen iney wax bartaan laakiin waxay aad u daneynayeen iney sidoo kale iska ciyaaraan.
Ceeb ka timid u hogaansamid la’aanta xeerka boqortooyada
Maalin maalmaha ka mid ah, agaasimaha qasriga, Mansoor El-Shahry ayaa iga codsaday inaan la kulmo boqorka mustaqbalka, oo doonayay in macluumaad laga siiyo heerka wax barashada ee carruurtiisa. Waxaan u maleynayay in taasi ay ahayd fursadda ugu fiican ee aan ugu sheegi karo akhlaaq xumada Amiir Maxamed.
In muddo ah ayaan ku sugayay bannaanka xafiiska Amiir Salmaan, anigoo la joogay macallimiinta kale ee qoyska boqortooyada, kuwaasoo u muuqday iney iyaga yaqaanneen xeerka dhaqanka boqortooyada.
Markii uu noo yimid, macallimiintii kale waxay billaabeen iney mid mid ugu tagaan, salaamaan, gacanta ka dhunkadaan ka dibna u shegaaan macluumaadkooda.
Aniga markii la isoo gaaray, ma sameyn karin sidaas, maadaama ay nolosheyda ahayd isla sida tooda oo kale, waligey sidaasoo kale ma sameynin. Waan u tagay boqorka mustaqbalka, waan gacan qaaday si adag ayaana gacantiisa u gilgilay.
Waxaan xasuustaa in wajigiisa ay caro badan ka muuqatay, hase ahaatee ma uusan igala hadlin waxa ceebta loo arkayay ee aan sameeyay.
Ma aanan kala hadlin waxa uu Amiir Maxamed ku sameyn jiray fasalka dhexdiisa, sababtoo ah isla markaasba waxaan go’aansaday inaan ku laabto waddanka Ingiriiska.
Wax yar ka dib, Mr El-Shahry ayaa ii yimid iguna canaantay sida aan u raaci waayay xeerka dhaqan ee boqortooyada.
Marka laga reebo Amiir Khaalid, oo laga dhigay safiirka Sucuudiga ee Mareykanka, carruurta kale ee boqortooyada aan wax ku baray intooda badan waxay doorteen ineysan caan ka dhex noqonin bulshada.
Maxamed Bin Salmaan, maanta isagoo 33 sano jir ah ayuu yahay wasiirka difaaca ee Sacuudiga waana qofka ugu sokeeya ee iska leh dhaxalka boqortooyada.
Tan iyo markii uu qabtay xilka dhaxal sugaha, wuxuu sameeyay isbadallo loo baahnaa wuxuuna qaaday tallaabooyin adag oo uu ku wajahayay dadka mucaaradka ku ah boqortooyada.
Inkastoo lagu amaanay qaar ka mid ah ficilladiisa, hadana waxaa lagu cambaareeyay kuwo kale.
Arrimaha ugu waaweyn ee lagu dhaleeceeyay Maxamed Bin Salmaan waxaa ka mid ah inuu lahaa mas’uuliyadda dagaalka Yemen iyo dilkii wariye Jamaal Khaashuqji.
Xukuumadda Sucuudiga waxay maxkamadeysay 11 ruux oo loo heysto dilka Khaashuqji, waxayna beenisay in Maxamed Bin Salmaan uu ku lug lahaa falkaas.
Hadda khibraddaas aan qasriga boqortooyada Sucuudiga ku soo qaatay waa xalaqo yar oo ka mid ah xusuusta nolosheyda ee la soo dhaafay balse waxaan imika daawanayaa maamulaheygii yaraa oo hadda saameyn ku leh maamulka adduunka.